Indlela yokuphepha ukutshintsha kwemozulu: iingcebiso ezilungileyo | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
Indlela yokuphepha ukutshintsha kwemozulu
Ukutshintsha kwemozulu yeyona ngxaki inkulu abantu abajongene nayo kule nkulungwane. Imozulu yethu iyatshintsha kwaye kunye nazo zonke izinto eziguquguqukayo zemozulu kunye neepateni zomoya. Abona nobangela baphambili bolu tshintsho lwemozulu lubangelwa ikakhulu ngabantu. Imisebenzi yezoqoqosho yabantu iya ithoba isidima kwaye itshabalalisa indalo ephilayo. Ngamnye njengomntu unokuthatha amanyathelo ahlukeneyo ukuthintela oku kukwanda. Abantu abaninzi bayazibuza indlela yokuphepha ukutshintsha kwemozulu.
Ke ngoko, sixoxa ngezona zikhokelo zibalaseleyo zokufunda ukuphepha ukutshintsha kwemozulu.
1 Amanyathelo okufunda indlela yokuphepha ukutshintsha kwemozulu
1.1 Yehlisa izinto ezikhutshwayo
1.3 Lawula izixhobo zombane
1.4 Tshintsha iibhalbhu ze-LED
1.5 Ukuphepha njani ukutshintsha kwemozulu ngokurisayikilishwa
1.6 Ukupakishwa okuncinci
1.7 Phucula ukutya
1.9 Sebenzisa amanzi ashushu amancinci kunye nenkxaso evuselelekayo
Amanyathelo okufunda indlela yokuphepha ukutshintsha kwemozulu
Yehlisa izinto ezikhutshwayo
Ukuba ufuna ukuthatha inxaxheba ekulweni nokutshintsha kwemozulu, sebenzisa imoto yakho ngokumodareyitha. Sebenzisa iindlela zothutho ezizinzileyo kangangoko kunokwenzeka, ezifana neebhayisekile okanye usebenzise izithuthi zikawonke wonke. Ngokubhekiselele kwimigama emide, eyona nto izinzileyo zizitimela, kwaye ngaphezu kweenqwelomoya, inoxanduva lwenxalenye enkulu yokukhutshwa kwecarbon dioxide emoyeni. Ukuba kufuneka usebenzise imoto, Gcina ukhumbula ukuba ikhilomitha nganye oyikhawulezileyo yonyusa i-CO2 kwaye ixabisa kakhulu. Ilitha nganye yamafutha asetyenziswe yimoto imela malunga neekhilogram ezi-2,5 zekharbon diokside ephuma emoyeni.
Ngemigaqo emincinci ekhaya sinokufunda indlela yokuphepha ukutshintsha kwemozulu ngokonga amandla. Makhe sibone ukuba zeziphi ezo zikhokelo:
Sukushiya iTV yakho kunye nekhompyuter ikwimowudi yokulinda. Umabonwakude uvula iiyure ezintathu ngosuku (ngokomndilili, abantu baseYurophu babukela umabonwakude) kwaye uhlala elindile iiyure ezingama-21 ezishiyekileyo, esebenzisa i-40% yamandla ewonke kwimowudi yokulinda.
Sukushiya itshaja yakho yeselula iplagiwe kubonelelo lombane ngalo lonke ixesha, nokuba ayixhunyiwe kwifowuni, kuba iya kuqhubeka idla amandla.
Hlala ulungelelanisa i-thermostat, nokuba kukufudumeza okanye ukupholisa umoya.
Lawula izixhobo zombane
Ubusazi na ukuba ngokusebenzisa izixhobo zombane ezikwikhaya lakho ngenkathalo nangenkathalo unganegalelo kumlo ochasene nokutshintsha kwemozulu? Sikunika iingcebiso:
Gubungela ipani ngelixa ukupheka kuyindlela enhle yokugcina amandla. Okungcono ngakumbi ngabapheki boxinzelelo kunye nee-steaers, ezinokugcina amandla angama-70%.
Sebenzisa umatshini wokuhlamba izitya kunye nomatshini wokuhlamba kuphela xa zithe zahlutha. Ukuba akunjalo, sebenzisa inkqubo emfutshane. Akuyimfuneko ukuseta ukushisa okuphezulu, njengoko i-detergents yangoku iyasebenza nakwiqondo lokushisa eliphantsi.
Recuerda que iifriji kunye nezikhenkcisi ziya kudla amandla amaninzi ukuba zikufuphi nomlilo okanye kwibhoyila. Ukuba sele indala, yinyibilikise ngamaxesha athile. Entsha inomjikelo wokuthomalalisa iqhwa ophantse waphinda kabini ngokufanelekileyo. Musa ukubeka ukutya okushushu okanye okufudumeleyo efrijini: uya konga amandla ukuba uyeke ukuba kuphole kuqala.
Tshintsha iibhalbhu ze-LED
Ukutshintsha iiglowubhu zesintu kunye neebhalbhu zokukhanya zokonga yonga ngaphezu kweekhilogram ezingama-45 zecarbon dioxide nyaka ngamnye. Enyanisweni, okwesibini kubiza kakhulu, kodwa kuncinci ebomini bakho. Ngokutsho kweKhomishini yaseYurophu, omnye wabo unokunciphisa ibhilikhwe yombane ukuya kuthi ga kwi-60 euro.
Ukuphepha njani ukutshintsha kwemozulu ngokurisayikilishwa
Injongo ye-3R yokwenza lula ukulwa nokutshintsha kwemozulu ngokwenza izinto ezintathu:
Idla ngaphantsi kwaye isebenza kakuhle.
Sebenzisa imarike esele isetyenzisiwe ukunika elinye ithuba lezinto ongasazisebenzisiyo okanye lokufumana izinto ezingafunwayo ngabanye. Uya konga imali kwaye uya kukwazi ukunciphisa ukusetyenziswa. Ziqhelise ukunxibelelana.
Ukuphinda kusetyenziswe ukupakishwa, inkunkuma yombane, njl. Ubusazi na ukuba unokonga ngaphezulu kwe-730 kg yecarbon dioxide ngonyaka ngokuphinda usebenzise isiqingatha senkunkuma eveliswa ekhayeni lakho?
Khetha iimveliso ezinokupakishwa okuncinci: ibhotile ye-1,5 litre ikhupha inkunkuma encinci kune-3 yebhotile.
Xa usiya kuthenga, sebenzisa iingxowa ezinokuphinda zisetyenziswe.
Kuphephe ukusebenzisa izinto zosula ezimanzi kunye nephepha elininzi. Ukuba unciphisa inkunkuma nge-10%, unokukuphepha ukukhutshwa kwe-1.100 kg ye-carbon dioxide.
Ukutya okune-carb ephantsi kuthetha ukutya okuhlakaniphile kunye nokujongana nokutshintsha kwemozulu.
Nciphisa ukusetyenziswa kwenyama - Imfuyo yenye yezona zinto zingcolisa umoya-kunye nokwandisa ukusetyenziswa kweziqhamo, imifuno kunye nemifuno.
Thenga iimveliso zasekhaya kunye nezexesha lonyaka: Funda iilebhile kwaye utye iimveliso zemvelaphi ekufutshane ukunqanda ukungenisa elizweni okucinga ukuba kukhutshwa izinto ezongezelelweyo zezothutho.
Kananjalo sebenzisa iimveliso zonyaka ukunqanda ezinye iindlela zemveliso ezingazinzileyo.
Zama ukusebenzisa iimveliso ze-organic ngaphezulu kuba zimbalwa izibulali-zinambuzane kunye nezinye iikhemikhali ezisetyenziswa kwinkqubo yokuvelisa.
Kumlo ochasene nokutshintsha kwemozulu, ukhuseleko lwamaqela amahlathi kufuneka lufunwe:
Ziphephe izenzo ezinokubeka umngcipheko womlilo, njengokutshisa kwiindawo zendalo.
Ukuba kufuneka uthenge iinkuni, bheja ngesiqinisekiso okanye itywina lemvelaphi ezinzileyo.
Tyala umthi. Umthi ngamnye unokufunxa ukuya kutsho kwitoni yecarbon dioxide, ngoko uya kunceda ukulwa nokutshintsha kwemozulu.
Sebenzisa amanzi ashushu amancinci kunye nenkxaso evuselelekayo
Umthamo omkhulu wamandla uyafuneka ukufudumeza amanzi. Ezi zezinye izenzo ezichasene nokutshintsha kwemozulu nazo ziya kongela imali:
Faka isilawuli sokuhamba kwamanzi kwishawari kwaye uya kukuphepha ukukhutshwa kwe-100 kilos ye-carbon dioxide ngonyaka.
Hlamba ngamanzi abandayo okanye ashushu kwaye uya konga i-150 kilos ye-CO2.
Wonga amanzi ashushu kwaye usebenzisa amandla angaphantsi kane ukuba uyahlamba endaweni yokuhlamba.
Yicime impompo ngelixa uhlamba amazinyo.
Qinisekisa ukuba iimpompo zakho azivuzi. Idriphu inokuphulukana namanzi aneleyo okugcwalisa ibhafu kwinyanga.
Ekugqibeleni, enye yezenzo zokulwa nokutshintsha kwemozulu onokuyenza kukukhetha amandla aluhlaza kunye nokukhuthaza ukuveliswa kwamandla avuselelekayo afana nelanga, umoya, i-hydraulic, njl.
Ndiyathemba ukuba ngezi ngcebiso unokufunda ngakumbi malunga nendlela yokuphepha ukutshintsha kwemozulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Indlela yokuphepha ukutshintsha kwemozulu